နိုင်ငံရေး အခြေခံ နားလည်ချင်သူတိုင်း ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်များ - For her Myanmar
နိုင်ငံရေး အခြေခံ နားလည်ချင်သူတိုင်း ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်များ
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်ကြသူတွေအတွက်
ဗဟုသုတစုံချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ စူးစမ်းလေ့လာချင်သူယောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးအကြောင်း လေ့လာလို့ရစေမယ့် စာအုပ်သုံးအုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
၁။ နိုင်ငံရေးလေ့လာလိုသူ လူငယ်တို့အတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ (ဒေါက်တာထွန်းဝင်း)
နိုင်ငံရေးလေ့လာလိုသူ လူငယ်တို့အတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ
စာရေးဆရာ ဒေါက်တာ ထွန်းဝင်း ရေးသားတဲ့ လူငယ် နဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကတော့ စာအုပ်အဖွင့်မှာတင် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲ ဆိုတာကနေ စတင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရေး သဘောတရားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတို့ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို နိုင်ငံတကာအခြေအနေ၊ မြန်မာပြည် အခြေအနေတို့နဲ့ ဥပမာပေး ရှင်းလင်းပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအကြောင်း ခုမှ စပြီး လေ့လာမယ့် ယောင်းတို့အတွက်၊ လူငယ်လေးတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေစေမယ့် စာအုပ်လေးပါပဲ။
Related Article >>> အမျိုးသမီးနှင့် နိုင်ငံရေး
၂။ လူငယ် နှင့် နိုင်ငံရေး ။ နိုင်ငံရေး နှင့် လူငယ် (သန်းဝင်းလှိုင်)
ဒီစာအုပ်ကလည်း နိုင်ငံရေး အခြေခံသဘောတရားတွေ လေ့လာလိုတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လို နိုင်ငံရေးဝါဒတွေရှိလဲ စတာတွေအပြင် ထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ ကမ္ဘာ နဲ့ မြန်မာက နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရဲ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှဝေခဲ့တဲ့ အတွေးအမြင်တို့ကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကို စာရေးသူက ညီ၊ညီမငယ်တွေကို ရှင်းလင်းပြောပြဟန် နဲ့ ရေးသားထားတာမို့ စာဖတ်သူတွေကို ပျင်းရိငြီးငွေ့စေမှာ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှာပါ။ ဖတ်ကြည့်နော် ယောင်းတို့…
၃။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အမျိုးမျိုး (ရွှေကူမေနှင်း)
ဆရာမကြီး ရွှေကူမေနှင်း ရေးသားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အမျိုးမျိုး ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလည်း လူငယ်တွေ ဖတ်ကို ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ စံနှုန်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေ သိထားဖို့ လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား… ဆရာမကြီးက ဒီစာအုပ်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းကို တိုတိုရှင်းရှင်း၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားထားတာမို့ လူငယ်တွေ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲ။
Related Article >>> အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖရာရီလမ်းခွဲကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ….
ဒီစာအုပ်တွေက လူငယ်တွေအတွက် ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေခံ နိုင်ငံရေး သဘောတရားတွေနဲ့ လူငယ်တွေ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မျှဝေပေးထားတာပါ။ ယောင်းတို့လည်း ဒီစာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုပြီး နိုင်ငံရေးအသိအမြင်ကြွယ်ဝလို့ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တတ်စွမ်းသလို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ လူငယ်လေးတွေ ဖြစ်လာကြပါစေလို့..
နိုငျငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ သိခငျြကွသူတှအေတှကျ
ဗဟုသုတစုံခငျြပါတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ စူးစမျးလလေ့ာခငျြသူယောငျးတှပေဲဖွဈဖွဈ နိုငျငံရေးအကွောငျး လလေ့ာလို့ရစမေယျ့ စာအုပျသုံးအုပျနဲ့ မိတျဆကျပေးမယျနျော။
၁။ နိုငျငံရေးလလေ့ာလိုသူ လူငယျတို့အတှကျ နိုငျငံရေးဆိုငျရာ လူမှုရေးကိစ်စရပျမြား (ဒေါကျတာထှနျးဝငျး)
နိုငျငံရေးလလေ့ာလိုသူ လူငယျတို့အတှကျ နိုငျငံရေးဆိုငျရာ လူမှုရေးကိစ်စရပျမြား
စာရေးဆရာ ဒေါကျတာ ထှနျးဝငျး ရေးသားတဲ့ လူငယျ နဲ့ နိုငျငံရေး ဆိုတဲ့ စာအုပျကတော့ စာအုပျအဖှငျ့မှာတငျ နိုငျငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ နိုငျငံရေးသမားဆိုတာ ဘာကို ချေါတာလဲ ဆိုတာကနေ စတငျရှငျးပွထားတာဖွဈပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး နိုငျငံရေး သဘောတရားတှနေဲ့ နိုငျငံရေးသမားတို့ ရှိသငျ့တဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားတှကေို နိုငျငံတကာအခွအေနေ၊ မွနျမာပွညျ အခွအေနတေို့နဲ့ ဥပမာပေး ရှငျးလငျးပွထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံရေးအကွောငျး ခုမှ စပွီး လလေ့ာမယျ့ ယောငျးတို့အတှကျ၊ လူငယျလေးတှအေတှကျတော့ အဆငျပွစေမေယျ့ စာအုပျလေးပါပဲ။
Related Article >>> အမြိုးသမီးနှငျ့ နိုငျငံရေး
၂။ လူငယျ နှငျ့ နိုငျငံရေး ။ နိုငျငံရေး နှငျ့ လူငယျ (သနျးဝငျးလှိုငျ)
ဒီစာအုပျကလညျး နိုငျငံရေး အခွခေံသဘောတရားတှေ လလေ့ာလိုတဲ့ လူငယျတှအေတှကျ နိုငျငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘယျလို နိုငျငံရေးဝါဒတှရှေိလဲ စတာတှအေပွငျ ထူးခြှနျထငျရှားတဲ့ ကမ်ဘာ နဲ့ မွနျမာက နိုငျငံရေးသမားတှေ ရဲ့ နိုငျငံရေး နဲ့ ပတျသကျပွီး မြှဝခေဲ့တဲ့ အတှေးအမွငျတို့ကိုပါ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနဲ့ တငျပွထားပါတယျ။ ဒီလို နိုငျငံရေးအကွောငျးတှကေို စာရေးသူက ညီ၊ညီမငယျတှကေို ရှငျးလငျးပွောပွဟနျ နဲ့ ရေးသားထားတာမို့ စာဖတျသူတှကေို ပငျြးရိငွီးငှစေ့မှော မဟုတျဘဲ စိတျဝငျစားအောငျ ဆှဲချေါသှားနိုငျမှာပါ။ ဖတျကွညျ့နျော ယောငျးတို့…
၃။ ဒီမိုကရစေီ စနဈအမြိုးမြိုး (ရှကေူမနှေငျး)
ဆရာမကွီး ရှကေူမနှေငျး ရေးသားတဲ့ ဒီမိုကရစေီ စနဈအမြိုးမြိုး ဆိုတဲ့ စာအုပျကလညျး လူငယျတှေ ဖတျကို ဖတျထားသငျ့တဲ့ စာအုပျဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မွနျမာပွညျက ဒီမိုကရစေီစနဈကို ကငျြ့သုံးနတေဲ့ တိုငျးပွညျဖွဈတဲ့အတှကျ လူငယျတှအေနနေဲ့ ဒီမိုကရစေီရဲ့ စံနှုနျးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကရစေီ စနဈဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကရစေီဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာမြိုးတှေ သိထားဖို့ လိုအပျတယျ မဟုတျလား… ဆရာမကွီးက ဒီစာအုပျမှာ ဒီမိုကရစေီစနဈအကွောငျးကို တိုတိုရှငျးရှငျး၊ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ရေးသားထားတာမို့ လူငယျတှေ ဖတျရှုသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျပါပဲ။
Related Article >>> အှနျလိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ဖရာရီလမျးခှဲကို ဖတျကွညျ့တဲ့အခါ….
ဒီစာအုပျတှကေ လူငယျတှအေတှကျ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပျတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ အခွခေံ နိုငျငံရေး သဘောတရားတှနေဲ့ လူငယျတှေ သိထားသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို မြှဝပေေးထားတာပါ။ ယောငျးတို့လညျး ဒီစာအုပျတှကေို ဖတျရှုပွီး နိုငျငံရေးအသိအမွငျကွှယျဝလို့ တိုငျးပွညျကို ကိုယျတတျစှမျးသလို အကြိုးပွုနိုငျတဲ့ လူငယျလေးတှေ ဖွဈလာကွပါစလေို့..
Tags: Book review, Books, Knowledge, Politics, Youths and Politics
ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးတဲ့ IMDB rating မြင့် အန်နီမေးရှင်း ရုပ်ရှင် (၄) ကား
Introvert တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်နည်း (၆) သွယ်
Sugar Cane January 10, 2019